Abbaan Warraa Hidhaa Ba’e Biyya Baqaa Keessa Jira, Haadha warraa Isaa – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioAbbaan Warraa Hidhaa Ba’e Biyya Baqaa Keessa Jira, Haadha warraa Isaa
WAASHINGITAN, DIISII —(VOA Afaan Oromoo) — Bara 2015 Saa’udii keessa jiraachuuf ehama hin qabu jedhamee biyyatti deebifame. Yeroo filannootti dhiyoo ture yeroon isaa. Bakka dhaloota isaa godinaa Harargee Bahaa dhaqee haadha warraa fuudhe. Garuu, yeroo gabaabaa keessatti hidhamee ragaan dhabamnaan gadhiifame. San booda haatii warraa barattuu waan turteef achuumatti dhiisee gara Finfinneetti ol ba’e. Achuuma Finfinnee keessaa qabamee hidhame. “Dararaa guddaan hidhaa keessatti erga na irratti rawwatamee fi baatii afur eegan hidhamee booda ragaan hakimaa haala gaarii irra hin jiru waan jedheef akkasumas ragaan tokko iyyuu waan dhibeef na gadhiisan” jedha.